पहिलो पाना || सूचना/प्रविधि
अरबौं वर्षसम्म डाटा सुरक्षित राख्न सकिने डिस्क
ब्रम्हाण्डको आयु कति होला ? अनुमान मात्रै गर्न सकिने कुरा हो । वैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेअनुसार, ब्रम्हाण्डको आयु १३.७७२ अरब वर्ष भइसकेको छ । त्यसै गरी, सूर्यको आयु ४.६०३ वर्ष र पृथ्वीको आयु चाहिँ ४.५४३ अरब वर्ष पुगिसकेको छ । मानव जीवनको आयुको तुलनामा यो अति धेरै, सोच्नै नसक्ने समयावधि हो । अब कल्पना गर्नुहोस्, के यति धेरै समयावधिभरि वा अझ भनौं, त्योभन्दा पनि बढी समयसम्म रचनाहरु, सिर्जनाहरु, फोटाहरु,...
मेरा साना दुःखले बनाया संगठन होइन
– किशोर पौडेल “मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन” राष्ट्रनिर्माता पृथ्विनारायण शाहको यो भनाइले नेपाल देश निर्माण गर्न कतिसम्मको मेहेनत र परिश्रम गर्नुपर्‍यो भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । कुनै पनि नँया कुराको प्रतिपादन गर्न, उत्पादन गर्न या रचना गर्न गर्नुपर्ने मेहेनतको गतिलो उदाहरण हो । परम्परागत रुपमा चलिरहेको व्यवहार वा क्रियाकलापमा परिर्वतन ल्याउन गरिने यस्ता कार्यले नँया सोचको साथसाथै परिर्वतनको भारि पनि अवश्य बोकेको हुन्छ । हिजोको...
अन्तरीक्षमा चीनको अपार सफलता
काठमाडौं । चीनले हालै पृथ्वीबाट नदेखिने चन्द्रमाको सतहमा पहिलोपटक रोबोट अन्तरीक्षयानको सफल अवतरण गराएको छ । चिनिया रोबोट यान चांग ए फोर चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवस्थित एटकेन बेसिनमा उत्रिएको छ । उक्त यानले चन्द्रमाको त्यस सतहका तस्वीर मात्र पठाउने होइन सुक्ष्म परीक्षण पनि गर्नेछ । चिनिया मिडियाहरुका अनुसार चन्द्रमामा अवतरित उक्त यानलाई अन्तरीक्ष अनुसन्धानको क्षेत्रमा एउटा कोशेढुंगाको रुपमा रहेको छ । चीनको अन्तरीक्ष कार्यक्रमको सुरुवात केवल डेढ दशक अघिमात्र भएको...
यी हुन् विश्वमा अहिलेसम्म धेरै बिक्री भएका १० मोबाइल फोन
एजेन्सी । विश्वमा मोबाइल फोनको प्रयोग भएदेखि यता अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोबाइल फोन कुन होला ? सामसुङ र एप्पलका पछिल्ला मोडेलका चर्चित स्मार्टफोन दुनियामा सबैभन्दा धेरै बिकेका मोबाइल फोन हुन् भन्ने तपाईंले सोच्नुभएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । विश्वमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बिक्री भएका स्मार्टफोनको सूचीमा टप टेनसम्म सामसुङको ग्यालेक्सी एस वा नोट सिरिज र नयाँ आइफोनका मोडेल कुनै पर्दैनन् । आखिर विश्वमा अहिलेसम्म...
चिकित्सा क्षेत्रमा चमत्कार, मृत महिलाको गर्भाशयबाट शिशुको जन्म
एजेन्सी । मानिसको मृत्यु भइसकेपछि उसको अंगलाई जीवित मानिसको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्नु निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, विश्वमै पहिलो पटक मृत महिलाको गर्भाशय जीवित महिलामा प्रत्यारोपण गरिएको छ । यति मात्र होइन, गर्भाशय प्रत्यारोपण गरिएकी महिलाले एक स्वस्थ बच्चीलाई जन्म पनि दिएकी छन् । ब्राजिलको साओपाओलो शहरमा २०१६ मा मृत महिलाको शरीरबाट गर्भाशय निकालेर अर्को महिलामा प्रत्यारोपण गरिएको थियो । १० घन्टासम्म चलेको प्रत्यारोपणपछि महिलाको फर्टिलिटी...
प्राधिकरणको आफ्नै मोबाइल एप्स, यस्ता छन् सुविधा
रमेश लम्साल, काठमाडौँ । तपाईंको कार्यालय वा निवासमा कुनै कारणवश विद्युत् कटौती भयो भन्ने कुराको जानकारी लिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रकाशित गर्ने सूचनाको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । उक्त सूचना सञ्चार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित भएपछि मात्रै थाहा हुन्थ्यो । पछिल्लो दिनमा प्राधिकरणले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएको उपलब्धिलाई प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई सहजै सूचना दिने उद्देश्यले नयाँ खालको मोबाइल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक...
काम सुरु भएको वर्ष दिन भित्रै देशैभरी फोरजी सेवा
काठमाडौं । फोरजी सेवा एलटीई विस्तारको काम सम्झौता भएको वर्ष दिन भित्र सम्पन्न हुने भएको छ। फोरजी अन्तर्गत कोर नेटवर्क र नेटवर्क विस्तार कार्य रहेको छ। काम सुरु भएको मितिले वर्ष दिन भित्र समपन्न गर्ने लक्ष्य रहेपनि नेटवर्क विस्तारको काम भने सुरु भएको छैन। अहिलेसम्म टेन्डर मात्रै दर्ता गरिएको छ। कोर नेटवर्क विस्तारका लागि कोर नेटवर्क विस्तारका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावे, जेटीई र सिंगापुरको मिभिनिर कम्पनीले...
रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिताले भिडियो किर्ते गरेको आरोप लगाउँदै पत्रकार किशोर श्रेष्ठदेखि एसपी दानबहादुर मल्लसम्मलाई किटानी जाहेरी दिएकी छन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको विशेष साधारण सभा सम्पन्न
कथासंग्रह ‘मरीचिका’ बजारमा
तराइमा भीषण हावाहुरी : करिब २५ जनाको मृत्यु, ४०० भन्दा माथि घाइते
जे.एन. खनालका परिवर्तनका स्वरहरु – २ गीतिसङ्ग्रह
पहिलोपाना डट कम
काठमाडौँ , नेपाल
पहिलोपाना डट कममार्फत हामी हरेक पलको समाचार सम्प्रेषण तथा विश्लेषण गर्दै सबै पाठकहरुसमक्ष पुर्याउने साथसाथै विभिन्न कुराहरुको जानकारी तथा सूचना प्रस्तुत गरी सबैलाई उत्साहित गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । मोबाइल फोन तथा कम्प्युटरको प्रयोग गरी जसले जतिबेला चाहेपनि एकै क्लिकमा इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न समाचार तथा सूचनाहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ ।